Abadlali beHandsome -Ifashoni yamadoda enesitayile | Amadoda aQinisekileyo
UAlicia tomero | | isiko, yokuPhila
Ukuba sifuna ukuchaza umkhondo womdlali weqonga, kufuneka sitsho njalo Ukuze udume, umsebenzi wakho kufuneka ungabi nasiphako. Ngaphandle kokuba ngabadlali abathandekayo, ziingcali zemiboniso bhanyabhanya, ngabantu abanobuchule emsebenzini wabo, ndinomdla wokufuna ukuphucula usuku ngalunye ngakumbi nangayo Isimo sengqondo sokuyila
Bakhanya kuzo zonke iifilimu zakhe, kuba ngaphandle kokuba ngabadlali abalungileyo isibheno sabo sibenza ukuba bangadlulwa. Kwabaninzi baba badlali be-handsome i-elixir yolutsha olungunaphakade yenze isifotho kwabaninzi babo, ngelixa kwabanye ibenzile Ukuhamba kwexesha kubonisa umtsalane okhethekileyo ngakumbi kunabo.
0.1 Abadlali beSpanish abahle
0.2 UMaxi Iglesias
0.3 NguYesu Castro
0.4 UMiguel Ángel Silvestre
0.5 UMario Casas Sierra
1 Abadlali abathandekayo abangabo baseSpain
1.1 UJamie Dornan
1.2 UGerard Butler
1.4 UHenry Cavill
Abadlali beSpanish abahle
Umlingisi mhle, unomtsalane kwaye umhle oqale umsebenzi wakhe esenza uthotho lweTV kumabonwakude waseSpain. Kude kube namhla sele esenza umsebenzi obalaseleyo emva kwakhe kwaye unokubonwa kwiifilimu ezinje Iikowuti eziyi-8, Idayari kaCarlota o Ubuxoki kunye namafutha.
Lo mdlali uvela eCádiz Qiniseka ukuba ushiye ngaphezulu kwesinye sithambekile ngamehlo akhe angenayo. URose uzenzele udumo ngemovie Umntwana Ukusuka apho waqala umsebenzi ongenakunqandeka kunye nothotho oludumileyo lweSpanish. Enye yeefilimu zakhe ezitshintshiweyo Isiqithi esincinci kwaye kulo nyaka sele enemisebenzi eliqela eqhubekayo.
Ukulandelelana ukusuka ekhohlo ukuya ekunene: UMaxi Iglesias, uJesús Castro, uMiguel Ángel Silvestre kunye noMario Casas.
UMiguel Ángel Silvestre
Sonke siyamazi uMiguel Ángel ngendima yakhe kumabonakude U-Duke kuthotho Ngaphandle kwamabele akukho paradesi, phi waphakama waduma ngomsebenzi wakhe omkhulu kunye nesibheno esihle. Uye wenza iifilimu zaseSpain ezinje nge Umtshato ukusuka kumhlobo wam osenyongweni, Scorpion ngothando, kunye neefilimu zangaphandle kummandla waseMelika njenge Zhao o Ukucinga.
UMario Casas Sierra
Le nkwenkwana ineminyaka engama-34 wenze imisebenzi emininzi kamabonakude emenze waduma, Kwaye waqala ngokwenza intengiso kumabonwakude kwaye ukusuka apho waqala ukufunda ukwenza. Ukusukela ngoko ibiyinto engapheliyo yezivumelwano kunye nemisebenzi. Sinokumbona kwiimuvi ezidumileyo ezifana Imithi yeSundu kwiKhephu o Iimitha ezintathu ngaphezulu kwesibhakabhaka.
Abadlali abathandekayo abangabo baseSpain
Ungumlingisi wase-Bhritane kunye nemodeli eye yaphakama yaduma ngendima yakhe ekhokelayo Amathunzi angamashumi amahlanu nantlanu kagreyi. Uye waphakama waduma ngenxa yendlela entle aziphethe ngayo, eyimfihlakalo nenomdla kwinkwenkwe okoko wasilalisela ngendima ye umfana othandana nosozigidi. Sinokumbona eqongeni ngobunjalo bendoda enomdla njengakwimiboniso bhanyabhanya Ukurhangqwa kweJadotville o Ukuqala kweziQalo.
Lo mdlali waseScotland uyintliziyo egqibeleleyo kwaye yile nto ngeminyaka yakhe engama-50 usaphakamisa iminqweno. Amehlo akhe aluhlaza kunye nokuseta kweempawu zakhe kumnika umtsalane othile, ngaphandle kwento yokuba umsebenzi wakhe wobugcisa awumshiyi ngenxa yokuncoma okumbalwa, kuba ungumlingisi oyinyani kunye nomvelisi wefilimu. Sinokumbona kwiimuvi ezidumileyo kunye nokujonga okungokwenyama Oothixo baseYiputa, Ijoni likaThixo y Ukuhlasela i-White House.
Lo mdlali waseMelika unakho konke kwaye kukuba kwiminyaka engama-32 ubudala kunye nomzimba wakhe omkhulu ubangele ukuba afezekise onke amaphupha akhe, kuba sele efezekisiwe. Ukongeza ekubeni ngumdlali weqonga, uyimvumi kwaye kwikhondo lakhe elifutshane sele eneeprojekthi ezingenakubalwa usebenzile, kubandakanya uthotho lweTV kunye neemovie. Singayibona kwimiboniso bhanyabhanya yothando ukukhulisa inkanuko njengakwi Xa ndikufumana o UCharlie St. Cloud.
Ukulandelelana ukusuka ekhohlo ukuya ekunene: Jamie Dornan, Gerard Butler kunye noZac Efron.
Eyaziwa ngokuba yiSuperman entsha, umdlali obalaseleyo kunye nomzimba omnandi. Amehlo akhe aluhlaza abonisa ukuthamba, ngokuchaseneyo neenwele zakhe ezimnyama kwaye zimenza indoda enobuso obunomtsalane nobungenakuthintelwa kubafazi abaninzi. Abo bamaziyo bamchaza njengo indoda enkulu enoburharha obukhulu, kodwa ayisiyiyo yonke loo nto, njengoko umzimba wakhe wemisipha ubonakala ngathi wenziwe ngentsimbi. Singayibona kwiimovie ezinje Ongafiyo okanye Ukubala kweMonte Cristo.
Lo mdlali ubhetyebhetye, njengoko enomsebenzi oqaqambileyo njengoko Umdlali weqonga kunye nemvumi yeqela lomculo, isiginkci, umdlali wepiyano kunye nombhali wengoma yeqela elinye Imizuzwana engama-30 ukuya kuMars. Ubudala bakhe abuhambelani nomzimba wakhe, kuba kwiminyaka engama-48 ubudala usabugcina obobuso benkwenkwe engenacala kunye nokufikisa. Singayibona kwiimovie ezinje Ubomi obunokwenzeka bukaMntu o Ukuzama iphupha.
Ukusuka ekhohlo ukuya ekunene: UHenry Cayill, uJared Leto noKit Harington.
Isibheno sayo asinakuphikiswa kwaye kukuba umdlali weqonga wavuka njengogwebu kwindima yakhe njenge UJon Snow kuthotho oludumileyo lwe Imidlalo yeethrone. Ukuba unokuchazwa ngamagama ambalwa kubomi bokwenyani, izihlobo zakhe azisileli ukumenza afaneleke Indoda ebukekayo ngaphakathi nangaphandle, ikrelekrele kwaye inetalente enkulu. Asikuthandabuzi konke oku kuba kubengezela ukujonga ukuthamba, ukunyaniseka kunye nemagnethi ethi konke. Ngaphandle kwesikripthi sakhe kulo mzekelo mhle sinokumbona kwiimovie ezinje Ubunini obuphindwe kabini o ITestamente yoLutsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » yokuPhila » isiko » Abadlali abathandekayo